15 Xiddigiyayaasha Ugu Fiican Delhi | 2022 Faallooyinka ugu Fiican - Wareegga Hantida
Bogga ugu weyn 15 Xidigiyayaasheeda Ugu Fiican Delhi | 2022 Faallooyinka ugu Fiican
Isha sawirka: www.dmthinks.com
Sida muuqata, dad badan ayaa u hamuun qaba inay ogaadaan mustaqbalka, waxa keenay dhibaatooyinkooda nololeed, iyo sidoo kale inay xal u helaan dhibaatooyinkan halista ah. Laakiin qaar badan ayaa ka maqan inay ogaadaan meesha saxda ah ee lagu helo adeegyada noocaas ah.
Kuwa dhaca ogaanshaha ku saabsan faa'iidooyinka xiddigiska waxay had iyo jeer jecel yihiin inay ku fadhiistaan ​​mashiinka waqtiga oo ay fiiriyaan mustaqbalka si ay u arkaan waxa iyaga sugaya. Laakiin run ahaantii ma tahay mid macquul ah in xiddigiyayaashu ay bixin karaan marin u helka mustaqbalka iyo sidoo kale inay bixiyaan xallinta dhibaatooyinka nolosha halista ku ah?
Magaalada Delhi, waxaa jira xiddigiyayaal badan oo leh aqoon aad u weyn iyo saadaalin aad u sax ah dhammaan arrimaha adduunka. Waxay kaa caawin karaan xallinta arrimo kasta oo aad la kulanto.
Laakiin sidee baad ku heli kartaa astrologer -ka saxda ah, yaa bixin kara adeegga xiddigiska dhabta ah gaar ahaan Delhi? Ha ka welwelin, maqaalkani wuxuu ku wajahan yahay dib -u -eegista 15 -ka xiddig -yaqaanka ee ugu wanaagsan Delhi oo leh waayo -aragnimo sannado ah oo ku saabsan adduunka falaga.
WAA MAXAY ASTROLOGY?
Su'aasha ugu badan ee ku soo dhacda maanka guud ahaan layliga ayaa ah waa kuma cirbixiye? Saameyntan, waxaan marka hore qeexi doonaa.
Astrology waa barashada meydadka samada, meerayaasha iyo xiddigaha, iyo mowqifkooda marka la eego dhacdooyinka dhulka.
Sidaa darteed, Astrology guud ahaan waxaa loo fahmi karaa inay tahay sayniska daraasadda saamaynta waxyaabaha xiddigiska sida xiddigaha iyo meerayaasha ee la xiriira nolosha aadanaha.
Sidaa darteed, mowqifka iyo xaaladda meydadka samada (qorraxda, dayaxa, iyo meerayaasha) waqtiga iyo saacadda saxda ah ee dhalashadiisu waxay u egtahay inay saamayn ku yeelato ama go'aamiso qaabka dabeecaddooda, saamayn ku yeelato xiriirkooda caadifadeed, iyo sidoo kale saadaaliso heerka dhaqaale ee suurtogalka ah.
WAA MAXAY ASTROLOGERS -ku?
Su'aasha ugu badan ee dadku isweydiiyaan ayaa ah maxay sameeyaan Xiddigiyayaashu? Waa maxay adeegyada ay bixiyaan Xiddigiyayaasha Delhi? Iyo intee lacag ah ayay xiddigiyayaashu ku sameeyaan khibradooda?
Aynu ku bilowno soo koobitaan. Astrology waxay ku lug leedahay barashada isku -dhafka isku dhafka ah ee dhaqdhaqaaqa meydadka samada sida qorraxda iyo dayaxa, meerayaasha, dhaqdhaqaaqooda meeraha, iyo sida ay u saameeyaan xaaladaha aadanaha iyagoo falanqeynaya dhaqdhaqaaqyada iyo dabeecadaha iyada oo loo marayo calaamadaha zodiac.
Iyo si loo go'aamiyo kala duwanaanshaha jir ahaaneed iyo qaab -dhismeedka aadanaha, Xiddigiyayaashu waxay shaxdaan qorraxda, dayaxa, meerayaasha, iyo xiddigaha kale waqtiga dhalashada shaqsiga.
Xiddigiyayaashu waxay kuu sheegaan mustaqbalkaaga ama waxay saadaalin karaan dhibaatooyinka noloshaada waxayna sidoo kale kaa caawin karaan inaad ka soo baxdo dhibaatooyinkaaga. Ka -faa'iideystayaasha xiddigisku waxay soconayaan ilaa inta ay jiraan dhibaatooyin xanuunsan oo dhakhaatiirtu aysan helin daawo cad.
Markaa, kaalmada aqoonyahannada iyo waayo -aragnimada baaxadda leh waxay ka caawin kartaa dadka murugsan iyo kuwa dhibaataysan inay ka saaraan caqabadaha noloshooda ku xeeran. Sidoo kale, waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin khabiir ku takhasusay dawaynta iyo dhakhaatiirta arrimaha jecel ama arrimaha caafimaadka.
Guud ahaan, adeegyada ay bixiyaan Xiddigiyayaasha Delhi waa;
2. Jacaylka xalka dhibka
3. Jacaylka xalalka guurka
4. Xallinta khilaafaadka qoyska
5. Tallaabooyinka xakamaynta carruurta
6. Xallinta dhibaatooyinka dhaqaale
7. Dhibaatooyinka ganacsiga ee xallinta nacaybka
8. Horumarinta arrimaha caafimaadka
9. Xalalka bogsashada oo degdeg ah oo waxtar leh
11. Akhrinta maskaxda
12. Ka saarida sixirka madow ee taban.
Si kastaba ha noqotee, si loo gaaro waxyaalahan oo dhan, Mantras waxaa loo heesaa waqti cayiman si loo soo celiyo jacaylkii lumay. Awoodda mantras -ka ayaa qasba maskaxda qofkaas waxayna bilaabaan inay dareemaan soo jiidashada jaceylkooda kala maqan.
Sidaa darteed, marka laga reebo akhrinta booska xiddigaha, qorraxda iyo dayaxa, Cirbixiyeyaasha Delhi waxay adeegsadaan sheekaysiga dhalmada/horoscope si ay u qeexaan sababaha ka dambeeya dhalashada.
Arrimaha maaliyadeed waxaa sidoo kale lagu xallin karaa iyadoo la saxo maanka iyadoo loo marayo sixitaanka iyo dhagaxa dhagaxa leh, sharciga soo jiidashada, sixirka cagaaran iyo sameynta yoga wanaagsan sida
1. Yoga Dhan.
Xiddigaha reer Delhi waa aqoonyahanno iyo khubaro ku xeeldheer arimahan waxayna gebi ahaanba u heellan yihiin inay dadka ku noolaadaan nolol farxad iyo barwaaqo leh. Waxa ugu fiican ee ku saabsan xiddigiyayaasha Delhi waa inay gabi ahaanba dhab ka yihiin shaqadooda.
Ugu dambayntii, ugu dambayntii, cilmiga xiddigisku wuxuu ku siinayaa fursado badan oo aad naftaada ku baratid oo aad ku hesho aqoon qoto dheer oo ku saabsan naftaada. Waa daraasad aad u qurux badan oo kuu beddeli karta qof gebi ahaanba ka duwan.
Sidoo kale, cilmiga xiddigisku wuxuu celcelis ahaan siiyaa dhakhaatiirtiisa fursad weyn oo uu ku kasbado adeegga firfircoon.
Lacag intee la'eg ayay sameeyaan Xiddigiyayaasha Delhi?
Si aad uga jawaabto su'aashan caadiga ah inta lacag -yahannada xiddigiska ee Delhi sameeyaan, waa muhiim inaan tan xusno. Celceliska mushaharka xiddigaha n Delhian aad bay u kala duwan yihiin sababtoo ah baahida caalamiga ah ee Xiddigiyayaasha iyo sahaydu aad bay uga yar yihiin baahida.
Xiddigiyayaashu waxay ku gorgortami karaan lacag aad u badan su'aal kasta oo la weydiiyo. Dhammaan waxay ku xiran tahay heerka waayo -aragnimada iyo sumcadda xiddig -yaqaanka marka loo eego heerka guusha saadaashiisa.
Laga soo bilaabo cabbirka celceliska, Mushaharka Xiddigisku wuxuu ka bilaaban karaa Rs.5,000 su’aal kasta ama saadaalin ama adeegyada xiddigiska. Laakiin dalabka xirfadlayaal khibrad leh oo aqoon leh waxay noqon kartaa wax kasta oo ay rabaan oo ay ka qaataan macmiilka adeegyada xiddigiska.
Ma baran kartaa xiddigiska?
Waa wax la fahmi karo haddii aad si kale uga fikirto barashada xiddigiska. Qaarkood waxay ku niyad jabaan fikirka ah inay dhib badan tahay, kakan tahay, oo laga yaabo inaysan helin fursado badan oo ay ku kasbato beerta. Si kastaba ha noqotee, qodobbada kor ku xusan waxay banneeyeen jahwareerka ku saabsan kasbashada. Taasi waa in la yidhaahdo, xiddigiyayaashu waxay kasbadaan dakhli wanaagsan ama weyn oo duurka ku jira.
Barashada cilmiga xiddigisku runtii ma aha mid adag laakiin kaliya waxay u baahan tahay go'aan iyo dadaal.
Barnaamijyada shahaadadu waxay socon karaan saddex ilaa shan sano iyadoo ku xiran haddii BSc ama MSc la xushay. Sannadka ugu horreeya ee daraasadda, ardayda waxaa loo sameeyaa inay yeeshaan fahamka asaasiga ah ee mabaadi'da asaasiga ah ee cilmiga xiddigiska, nidaamka qorraxda, cosmology, geochemistry iyo geology.
Laga soo bilaabo sannadihii labaad iyo saddexaad, waxay si qoto dheer u dabooli doonaan dhinacyada muhiimka ah ee cilmiga xiddigiska iyadoo tababar dheeraad ah la siinayo adeegsiga telescopes -ka indhaha iyo raadiyaha. Qaybaha caadiga ah waxaa ka mid ah hababka tirooyinka iyo xisaabinta, fiisigiska kuleylka iyo tirakoobka.
Sidoo kale akhri: 10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Dharka Caruurta ee Raqiis ah| Cusbooneysii
Waa maxay maaddooyinka la iga rabo si aan u barto shahaadada cilmiga xiddigiska?
Jaamacadaha badankood waxay u baahan doonaan darajooyin sare xagga fiisigiska ama xisaabta (ama labadaba) laakiin jaamacadaha qaarkood uma baahna.
Waa maxay xirfadaha Astronomy?
Astrology -gu wuxuu bixiyaa laba fursadood oo waaweyn - midkoodna waxaad ka shaqeysaa dhinaca aragtida ama goob wax ku ool ah.
Dhab ahaantii, qaar badan oo wax ka bartay koorsada jaamacadda ayaa laga yaabaa inay ku dambeeyaan doorar ku saleysan cilmi-baaris iyo shaqo ku saleysan shaybaarrada jaamacadaha ama qaybaha tacliinta ee indha-indheeyayaasha, meerayaasha madxafyada iyo matxafyada horumarinta bandhigyada, u fidinta aqoon isweydaarsiyo booqdayaasha, dayactirka farsamada iyo fulinta cilmi baaris.
Ardayda ka qalin jabisa cilmiga xiddigiska waxay kaloo raadin karaan shaqooyinka dowladda iyo waaxda aerospace -ka.
Ugu dambayntii, inta badan ardayda ka qalin jabisa cilmiga xiddigiska waxay ku dhaqmayaan oo ay lacag badan ka helaan. Dhab ahaantii, guusha qofka waxay ku xiran tahay runnimada adeegyadiisa iyo sidoo kale natiijada.
Hadda, miyaad ku faraxsan tahay inaad noqoto xiddigis -yaqaanka ama inaad la kulanto mid? Hagaag, halkan waxaan kuugu soo bandhigi doonaa 15ka xiddigood ee ugu fiican Delhi, 2021.
15 UGU FIICAN GEERIYEYAASHA DELHI
Magaalada Delhi, waxaa jira xiddigiyayaal badan waxaana loogu dabaaldegaa saadaashooda aadka u saxsan iyo hagitaanka dadka ee dhammaan raadadka nolosha.
Waxaa la sheegaa in caqabadaha nolosha lagu xallin karo oo keliya marka la fiiriyo mustaqbalka si loo ogaado tallaabada saxda ah ee la qaado oo la xaliyo arrimaha. Xiddigaha ugu fiican ee Delhi 2021 waa:
1. Guulaha Xiddigiska
Astro guru anubhav, waa aasaasaha astrologygains waana khabiir caan ku ah cilmiga xiddigiska sanado ka badan hadda .wuxuu leeyahay aqoon ballaaran oo ka badan 3000+ horoscopes.
Wuxuu caan ku yahay inuu dadka ka siiyo talooyinka xiddigiska dhabta ah arrimaha nolosha ee kala duwan. Daacadnimadiisii ​​goobta iyo macaamiishiisa ayaa dadka reer Delhi ku tilmaantay inuu yahay xiddigiyaha ugu fiican Delhi
Adeegyada Faa'iidada Xiddigiska waxaa ka mid ah;
Arrimaha Jacaylka & Xiriirka,
Hantida & Dacwada,
Arrimaha la xiriira Ilmaha,
Dib -u -habeynta Waqtiga Dhalashada,
Talo soo jeedinta Dhagaxa,
Xaaska Sayga Muran,
Warbixinta Saadaasha Nolosha oo Dhamaystiran,
Puja Online iwm.
Mob No: +91-7217619956, +91-8218143019, Email id: info@astrologygains.com
Akhri: 12-ka Barnaamij ee Wax-akhrinta Bilaashka ah ee Carruurta ugu Fiican
2. Xiddiglaha Shandeley Ji
Marka la eego jacaylka, xiddig -yaqaanka Shandeleyji, waa magac caan ku ah qaybo badan oo ka tirsan Delhi NCR oo ay ku jirto Gurgaon.
Wuxuu caan ku yahay inuu haysto tiro badan oo raacayaal ah oo aad wax u bartay kuna faafay booska ugu sarreeya berrinka. Waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican adduunka.
Adeegyada Shandeley Ji waxaa ka mid ah;
Xalka Dhibaatada Jacaylka,
Jacaylka Dib -u -xiddiglaha,
Faahfaahinta Xiriirka: Mobilka No - 9910195126
3. Dr. Alka Maalik
Wuxuu ka qalin jabiyay Jaamacadda Delhi wuxuuna ku shaqeynayay Astrology ilaa 2008.
Xiisaha ay u qabto mawduuca ayaa u horseeday inay barto qaababka kala duwan ee Xiddigiska kuwaas oo ah Vedic Astrology, Vaastu, Lal Kitab, Numerology, and Astrary Astrology.
Marwo Malik waxay isku darsataa farsamooyin dhaqameed iyo kuwo casri ah oo lagu bixinayo daawooyin kuwaas oo ka dhigay mid gaar ah.
Waxay ku takhasustay arrimaha la xiriira waxbarashada, shaqada, guurka, caafimaadka, guurka, ganacsiga, iyo carruurta. Degenaanshaha Delhi, Marwo Malik waxay si fiican ugu hadashaa Ingiriisiga iyo Hindiga.
+ 91 8939111722
4. Acharya Murari Faasas
Iyada oo laba iyo toban sano oo waayo -aragnimo ah uu ka dambeeyay, Shri Acharya Vats wuxuu saameyn ku leeyahay Hindi wuxuuna deggan yahay Delhi.
Wuxuu shahaadada Master -ka ee cilmiga xiddigiska ka qaatay Jaamacadda Sanskrit, University. Sidoo kale, waxaa lagu yaqaanaa inuu ku yaabi karo Astrology sababtuna tahay akhrintiisa joogtada ah iyo saadaasha.
Natiijo ahaan, Xiddig -yaqaanka wuxuu beddelay dhowr nolosha wuxuuna sidoo kale xalliyaa dhibaatooyinka dad badan oo isaga gaara.
Waa mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican Delhi.
Adeegyada Vats -ka Acharya Murari waxaa ka mid ah; Xiddigiska Vedic, VaastuShastra, Gemology, PrashnaShastra, Rudraksha.
Xiriir; +91 98992 77552
Jyotish Acharya Madhuri Ji waa astrologer soo socda oo cajiib ah oo aqoon fiican u leh soo saarista nebiyada ee dhibaatooyinka nolosha sida farcanka, xirfadda, waafaqsanaanta guurka, nolosha jacaylka, xasilloonida maaliyadeed.
Adeegyada Xiddigaha waxaa ka mid ah:
Hagaha Astro ee Waxbarashada,
Xiddig -yaqaanka Madhuri
Cinwaanka 1: -2162/14, West Patel Nagar New Delhi 110008
Taleefan: - 7011161223, - 7011161224
6. Xiddigiska Pankaj Kumar
Xiddiglaha Pankaj Kumar waa xiddig -yaqaan caan ka ah Delhi, India. Wuxuu khabiir ku yahay saadaasha wuxuuna aad u bartay aqoon aad u weyn xagga cilmiga xiddigiska, LalKitab, VastuShastra, Feng-Shui, PyraVastu, Numerology, iyo Gemology.
Waa xirfad -yaqaan astrologer ah oo ay ka go'an tahay inuu gaaro dadka u baahan khibradiisa iyo talooyinkiisa dhinacyada kala duwan ee noloshooda oo u baahan xallinta xiddigiska.
Adeegyada Pankaj waxaa ka mid ah;
jacayl, caafimaad, shaqo, iyo
Xiddigeeyaha Pankaj Kumar A-164, Dabaqa Koowaad, Ektavihar, Jhilmil Colony Delhi-110095.
Telefoonka +91 - 99 1072 7979 Iimayl info@astrologerpankajkumar.com
7. KP Tripathi
Tripathi wuxuu M. Tech ka sameeyay BHU (Banaras Hindu University). Waxaa lagu abaalmariyay aqoonsi Qaran waxaana ka dambeeya 20+ sano oo waayo -aragnimo ah.
Adeegyada xiddigiska ee Tripathi waxaa ka mid ah;
La -talinta ganacsiga,
la -talinta dhagaxa.
WZ-106/67 RAJOURI WAXBARASHADA GARDENKA P-76
8. xiddigiye Ankit Tyagi Ji
Astrologer AnkitTyagiji wuxuu caan ka noqday dhinacyada Astrology iyo Vastu.
Xiddigiyayaashan ku sugan Delhi aad bay u jecel yihiin barashada meerayaasha si loo saadaaliyo mustaqbalka taasna waxay sababtay inay sanado badan la shaqaysay xiddigiyayaasha.
Adeegyadiisa waxaa ka mid ah: Hagitaanka mihnadlaha, Matchmaking, Warbixinta Jacaylka, Talada Xirfadda, Dhagxaanta, La -tashiga, Hanuunka Guurka, Warbixinta Caafimaadka
Wac: + 91-8860590158
Aqoonsiga emaylka: astrogurueyes@gmail.com
9. Xiddig -yaqaanka Deepak Batra
Isaga oo ku guuleystay Bilad Dahab ah xagga Astrology -ga kuna siiyay Doctorate “VaastuShastra”.
Xiddig -yaqaanka Deepak Batra ayaa adduunka oo dhan caan ku ah hal -ku -dhiggiisa caanka ah ee “VAASTU VIGYAN KARE KALYAN BINNA THOD FOD BANE MAKAAN”, taas oo macnaheedu yahay inuu dib -u -habayn ku sameeyo VaastuDosh isaga oo aan burburin & dumin dhisme kasta oo ku yaal Gurigaaga & Goobtaada Shaqada.
Isagu waa saaxir si fiican loogu qaddariyay Astrology-ga kaas oo ka sii daraya Astro Vaastu wuxuuna si guul leh u helay hab uu uga baaraandego mustaqbalka macmiilkiisa si uu u gaaro dhalaal iyo guul dhammaan raadadka.
Adeegyadiisa waxaa ka mid ah: Samaynta Kundali, Horoscope, Gandmool dash, Gemstones, VastuShastra.
Guruji Bharat wuxuu caan ku yahay khabiir ku takhasusay cilmiga Numerologist, Gem Stone Consultant, iyo Vastu.
Guud ahaan, Himiladiisa nololeed waxay ku xirantahay inuu dadkiisa u keeno farxad, barwaaqo, guul, iyo ladnaan isagoo ka caawiya dhibaatooyinka noloshooda una horseeda nolol dhammaystiran oo qancisa.
Adeegyadiisa waxaa ka mid ah: Lacag, Ganacsi, Xirfad, Xiriir, Adeegyada xiddigiska
Astrologer caan ka ah adduunka, Anima Bhattacharya oo ka socota Varanasi, ayaa deggan Delhi.
Waxaa la og yahay in ay leedahay awood heer sare ah oo dareen leh iyada oo la jaanqaadaysa saadaasheeda Ilaah.
Anima waa khabiir ku xeel dheer Astrology, Numerology, Palmistry, VaastuShastra, iyo FengShui.
Waxay siisaa saadaalin sax ah maaddooyinka la xiriira Astrology -ga Vedic, oo ay ku jiraan ku -habboonaanta horoscope -ka, guurka, jacaylka, waxbarashada, xirfadda, xurmada, maaliyadda, farcanka, dhalmada, iyo cimri -dhererka.
Waxaa la ogyahay inay ku leedahay fudud, wax ku ool ah, oo wax ku ool ah Pooja iyo Vedic Mantras, iyo tallaabooyinka sixitaanku had iyo jeer waxay la socdaan la -talinteeda xiddigiska.
Adeegyadeeda waxaa ka mid ah:
La -talinta Xiddigiska
La -talinta Vastu
la -talinta neerfaha
Cinwaanka: Anima Astrologer, MayurVihar Phase-1, Delhi-110091
Kadib markii ay heshay tababar xirfadeed, waxay bilowday inay adeegyadeeda siiso dadka. Waxay khabiir ku tahay Nusht Kundali oo ka shaqaysa dhacdooyinka kala duwan ee nolosha dadka.
Marwo Rachna Sindhwani waxay aad ugu xeeldheer tahay cilmiga xiddigiska Vedic, Vaastu, Numerology, iyo KP Astrology.
Waxay u shaqeysaa La -taliye Vaastu ah
Adeegyadeeda waxaa ka mid ah; Vaastu Shastra, Numerology, Reiki, Akhrinta Kaarka Tarot, iyo Meditation.
Waxay khibrad u leedahay lix iyo toban sano aagga.
Faahfaahinta xiriirka: 7 Sh. Sunil MittalWZ-820 A, Beerta Rajouri, New Delhi-110027. 011-25100894
Shri Rajan Khillan wuxuu shahaadada ganacsiga ka qaatay Jaamacadda Delhi. Wuxuu deggan yahay Delhi wuxuuna si fiican ugu hadlaa Ingiriisiga, Hindi, iyo Punjabi.
Isagu waa guru ku jira karmic astrology ee la xiriira dib -u -dhalashada wuxuu yaqaannaa sida loo adeegsado cibaadooyinka si looga hortago dhibaatooyinka maskaxda ee macaamiisheeda.
Shri waxay bixisay saadaal guul iyo sax ah xagga caafimaadka, maaliyadda, hantida, xirfadda xiriirka, qoyska, guurka,
Astrologer -kan hibada leh waa khabiir ku takhasusay cilmiga xiddigiska maaliyadeed, Xiddigiska Caafimaadka, La -talinta Xirfadda, Astrology Corporate, iyo Matchmaking Astrology Remedial.
131 Jidka Weyn ee W. St Albans, VIC 3021
Akhri: 10 Barnaamijyada Ugu Wanaagsan ee Ka Shaqaynta Dibadda
14. Suudhir Sharma
Sharma waa La -taliye Astro, Bogsiiye Ruux, iyo aasaasihii Vedic Astro Insights, kaas oo bixiya Xalalka Astro ee la xiriira Hantida, Jacaylka, Xiriirka, Guurka, Waxbarashada, Qoyska, Xirfadda, Sumcadda, Guusha, Siyaasadda, Nabadda maskaxda & Ujeeddada Nolosha . Vedic Astro Insights waa Bixiyaha Adeegga Xiddigiska ee Noida, kaasoo kaa caawin doona inaad ku korto Maskaxiyan iyo Ruux ahaan noloshan.
Faahfaahinta xiriirka: Ia-23a, MIG Flats Ashok Vihar-I New Ashok Vihar 1, Delhi-110052
Wuxuu ku bartay cilmiga xiddigiska Vedic, wuxuu leeyahay aqoon aad u weyn oo duurka ku jirta oo leh shan iyo toban sano oo waayo -aragnimo ah. Soo jiidashadiisa ayaa dhistay xiisaha uu u qabo cilmiga la xiriira oo ku kallifay inuu si qoto dheer u galo noocyada kala duwan ee Xiddigiska.
Wuxuu ku fiican yahay isku -darka xigmadda qadiimiga ah iyo sayniska casriga ah taas oo fursad u furaysa habab cusub oo lagu fahmo maskaxda dadka. Astrologer -ka loo maleynayo wuxuu deggan yahay Delhi.
Adeegyadiisa waxaa ka mid ah;
Akhrinta Kaarka Tarot
Faahfaahinta xiriirka; 2/133, ARYA NAGAR KATHMANDI SONEPAT
Gebogebadii, waxaa jira Delhi xiddigo -yaqaanno u dabbaaldegaya saadaashooda iyo hagitaankooda aadka u saxsan laakiin balooggan; waxaad u timid inaad la kulanto 15 -ka xiddigiyayaasha ee ugu fiican Delhi.
Waxaa jira faa'iidooyin dhowr ah markaad la tashato xiddigaha ugu fiican Delhi waxayna ku siinayaan adeegyada xiddigiska ugu fiican dhammaan dhibaatooyinka nolosha.
15 -ka Barnaamij ee ugu sarreeya ee Saaxiibbo lagu Sameeyo 2022 -ka
Marna ma xuma in lagu daro liiska saaxiibbadaada, haddii aad hadda uun u guurtay magaalo cusub…
15-ka Buugaag ee ugu Wanaagsan Wiilasha Dhallinta | Waa in loo akhriyo Dhammaan Dhallinyarada
Saamaynta guracan ee buugaagta laguma dayacin karo nolosha bulshada, gaar ahaan dhalinyarada…
Lacag intee leeg ayaa ku jirta ATM? Intee in le'eg ATM ayaa qaban kara
Mar walba waxaan la yaabanahay inta lacag ee uu ATM-ku runtii qaadan karo. Ma u hayn kartaa lacag ku filan kor...
10ka shirkadood ee ugu mushaarka badan MLM ee 2022
Suuqgeynta heerka-badan (MLM) waxa ay noqotay hab caan ah oo dakhli lagu dhalin karo oo ka baxsan shaqa dhaqameedka. Qaybiyayaashu waxay ku biiraan…